Nin geeriyoodey ka dib markii ay booliisku qabteen - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Nin geeriyoodey ka dib markii ay booliisku qabteen
Publicerat torsdag 25 november 2010 kl 13.50
Nin 21 jir ah ayaa dhintey ka dib markii booliisku maalintii sabtida ku qabtey magaalada Karlstad,danbi baare ayaana hadda wuxuu bilaabey baaritaan uu ku sameeyo sababtii ninkaasi u dhintey iyo in khalad dhanka booliiska ka yimid ay sababtey dhimashadiisa iyo in kale.
Dariska ayaa booliiska wacay ka dib markii ay arkeen nin rabshado ku sameeynaya jaranjarada gurigooda.
Ninkaas ayaa markii danbe loo qaadey isbitaalka magaalada Karlstad ka dib markii loo arkey in ay jirto khatar ah in uu naftiisa dhaawac u geeysto ka dibna wadnaha ayaa ninkaas looga soo boodey ,wuxuuna dhintey maalintii axadda inkastoo aysan ilaa hadda caddeeyn waxa sababey dhimashadiisa.
Hadda ka hor ayaa dalkaan Iswiidhan waxaa ku dhintey dad ay booliisku qabteen ayna ka mid ahaayeen Johan Liljeqvist oo dhintey sanadkii 2008-dii iyo Osmo Vallo oo isna dhintey sanadkii 1995-tii.
Sanadkii 2007-dii ayaa waxaa la ashtakeey 597 askari oo boolis ah ka markii ay fara ka hadal shaqada ku isticmaaleen,tiradaas ayaa gaartey sanadkii 2008-dii 666,sanadkii la soo dhaafeyna waxay gaartey 724 xaaladood taas oo guud ahaan kor u kacdey qiyaastii boqolkiiba labaatan.